အမေရိကန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို အခုနှစ်ကုန် ပြန်စမယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး အမေရိကန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို အခုနှစ်ကုန် ပြန်စမယ်
A South Korean soldier aims his machine gun during an anti-terror exercise as part of Ulchi Freedom Guardian in Seoul, South Korea, Monday, Aug. 18, 2014. The U.S.-South Korean military exercises starting Monday and involving tens of thousands of troops are described by the allies as routine and defensive, but Pyongyang sees them as invasion preparation. (AP Photo/Ahn Young-joon)
အမေရိကန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို အခုနှစ်ကုန် ပြန်စမယ်
အမေရိကန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက စစ်သားထောင်ချီ ပူးပေါင်းပြုလုပ်မယ့် စစ်ရေးလေကျင့်မှုကို ရွှေဆိုင်းခဲ့ပေမယ့် အခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်လည်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ စစ်ရေးခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ အမေရိကန် တို့ဟာ ပူးတွဲစစ်ရေးလေကျင့်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ပြီး မတ်လနဲ့ ဧပြီလတွေမှာ ပူးတွဲစစ်ရေးလေကျင့်မှု ပုံမှန်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား စစ်ဘက်တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်သူ ချွိုင် ဟွန်ဆူးက ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ပြန်လုပ်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ပူးတွဲစစ်ရေးလေကျင့်မှု စတင်မယ့်ရက်နဲ့ အင်အား ဘယ်လောက်ပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို အတိအကျ မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ အမေရိကန်တို့ရဲ့ ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုတွေကို ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပဖို့ ရှိနေတာကြောင့် ပူးတွဲစစ်ရေးလေကျင့်မှုကို ဆိုင်းငံ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမရေိကနျနဲ့ တောငျကိုရီးယားတို့ရဲ့ ပူးတှဲစဈရေးလကေ့ငျြ့မှုကို အခုနှဈကုနျ ပွနျစမယျ
အမရေိကနျနဲ့ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံက စဈသားထောငျခြီ ပူးပေါငျးပွုလုပျမယျ့ စဈရေးလကေငျြ့မှုကို ရှဆေိုငျးခဲ့ပမေယျ့ အခုနှဈနောကျပိုငျးမှာ ပွနျလညျပွုလုပျသှားမယျလို့ တောငျကိုရီးယား ကာကှယျရေး ဝနျကွီးဌာနက ပွောပါတယျ။
မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ စဈရေးခွိမျးခွောကျမှုတှကေို တုံ့ပွနျနိုငျဖို့ တောငျကိုရီးယားနဲ့ အမရေိကနျ တို့ဟာ ပူးတှဲစဈရေးလကေငျြ့မှုတှေ လုပျခဲ့ပွီး မတျလနဲ့ ဧပွီလတှမှော ပူးတှဲစဈရေးလကေငျြ့မှု ပုံမှနျခဲ့ပါတယျ။ တောငျကိုရီးယား စဈဘကျတာဝနျရှိသူ တဈဦးဖွဈသူ ခြှိုငျ ဟှနျဆူးက ပူးတှဲစဈရေးလကေ့ငျြ့မှုကို ပွနျလုပျမှာ ဖွဈပမေယျ့ ပူးတှဲစဈရေးလကေငျြ့မှု စတငျမယျ့ရကျနဲ့ အငျအား ဘယျလောကျပါဝငျမယျဆိုတဲ့ အခကျြကို အတိအကြ မပွောနိုငျသေးဘူးလို့ ပွောပါတယျ။
မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံဟာ တောငျကိုရီးယားနဲ့ အမရေိကနျတို့ရဲ့ ပူးတှဲစဈရေး လကေ့ငျြ့မှုတှကေို ခွိမျးခွောကျမှုတှေ လုပျခဲ့ဖူးပါတယျ။ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမှာ ဆောငျးရာသီ အိုလံပဈပွိုငျပှဲ ကငျြးပဖို့ ရှိနတောကွောငျ့ ပူးတှဲစဈရေးလကေငျြ့မှုကို ဆိုငျးငံ့ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleကျွမ်းကျင်လုပ်သား အကဲဖြတ်ပေးနေတာ ရာခိုင်နှုန်း ထက်ဝက်ကျော် ပြီးစီး (ရုပ်/သံ)
Next articleရိုက်တာသတင်းထောက် ၂ ဦးအမှုကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးမချကြဖို့ ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီး တောင်းဆို